ratoपिरो.com - Blog for Entertainment - Page2of 51 - nepal entertainment news, video, manaranjan news nepal, nepali videos, wonders news, jokes, cartoon etc.
मनोरन्जनात्मक ब्लग - रातो पिरो
यी हुन् संसारकै सबैभन्दा ७ सेक्सी र अपराधी महिलाहरु
काठमाडौं । अनैतिक शारीरिक सम्बन्ध, ड्रग्स ओसारपसार तथा हत्या जस्ता कार्यमा संलग्न जो कोहीले पनि जेलको अनुभव गर्न सक्छन् । संसारभरका खुंखार र चर्चित अपराधीहरुको कहानी तपाईले पनि सुन्नुभएको होला । तर,...
यी ८ व्यक्ति जसले अचम्मको विश्व रेकर्ड बनाए
काठमाडौं । विश्व रेकर्ड बनाउन वा गिनिज बुकमा नाम लेखाउन अस्वभाविक क्षमता र सीप नै हुनुपर्छ भन्ने छैन । केही व्यक्तिले सीप र क्षमताबिना अनौठो रेकर्ड बनाउन सफल सफल भएका छन् । त्यस्ता व्यक्तिमध्ये...
मन्दिर त तपाईले धेरै देख्नुभयो होला । आज हामी त्यस्तो मन्दिरका बारेमा जानकारी दिँदैछौ जुन तपाईलाई थाहा छैन । संसारमा एक यस्तो मन्दिर छ जहाँ मूर्ति मानिस झै बोल्छ । पहिला यो कुरामा धेरैलाई...
यस्तो पनि देश छ, सडक मै बसेर मान्छेको मासु बेच्न थालियो !
बेलायतको राजधानी लण्डनको ट्राफेल्गर स्क्वाएरमा हरेक दिनजस्तै शनिवार पनि मानिसहरुको चहलपहल थियो । मानिसहरु व्यस्त थिए । सोही समयमा मानिसहरुको ध्यान चोकको बीचमा मान्छेको मासु बेचिरहेका केही व्यक्तिहरुतर्फ खिचियो । बीच सडकमा रगतले लतपतिएका...
अनौठो समाचार / नेपालको समाचार / मनोरन्जन
किन नेवार समुदाय ले हरितालिका तिज मान्दैनन र व्रत बस्नु पर्दैन, अनौठो रहस्य यस्तो रहेछ ।
हरितालिका तिज र ऋषि पञ्चमिको व्रत बस्ने परम्परा नेवार समुदायमा छैन । नेवार संस्कृतिले यस्तो गर्न दिँदैन। तीज मनाएमा इही गरेको बाह्रा राखेको कुनै अर्थ नै हुँदैन। तिज र ऋषिपञ्चमिको व्रत नेवार महीलाहरुले बस्ने...
१३ वर्ष पहिले हराएको हिराको औँठी गाजरमा भेटियो
क्यानडाको अल्बर्टाकी मेरी ग्राम्सको हिराको औँठी १३ वर्ष पहिले घरकै बगैँचामा हराएको थियो । त्यो सन् २००४ को कुरा थियो । अहिले मेरी ८४ वर्षकी छिन् । हराएको यति लामो समय हुुँदा समेत फेला...
संसारमा यस्तो पनि जीव पाइन्छ, जो कहिल्यै मर्दैन ! फोटो सहित…!!!
एजेन्सी: संसारमा जन्मलिने प्राय: सबै जीवको अन्त्‍य हुन्छ। तर के तपाईले कहिल्‍यै कहिल्‍यै नमर्ने जीवको बारेमा सुन्‍नुभएको छ ? उक्त जीवको नाम हो टार्डिग्रेड्स। यो जनावरको आठ वटा खुट्टा रहेको हुन्छ। [youtube https://www.youtube.com/watch?v=cjV2WP0wkvo] पानीमा...
विश्वका सात सुनसान शहर जहाँ, एकजना मात्र बस्ने यस्तो छ वास्तविक कारण
एजेन्सी । एउटा पूरै शहरमा एक्लै बस्ने कल्पना कसैले पनि गरेको हुँदैन । पूर्ण रुपमा अनकन्टार शहरमा को एक्लै बस्न चाहन्छ ? तर विश्वमा कतिपय यस्ता शहरुहरु पनि छन् जहाँ एकजना व्यक्ति मात्र बसिरहेका...
यि हुन् दुनियाकै एकान्तबासी परिवार
यो भागदौडपूर्ण जिन्दगीमा हरेक मानिस कुनै न कुनै समस्यालाई लिएर चिन्तित हुन्छ । यस्तैमा एक परिवार चाहिँ दैनिक सांसारिक जीवनलाई किनारा लगाउँदै अमेरिकी महाद्वीपको अलास्कास्थित नभिटना नदीभन्दा झण्डै ४ सय किलोमिटर टाढाको क्षेत्रमा एकान्तवासमा...
बाबुआमाले फोहोरको थुप्रोमा फालेको तीन महिने बालिकाको जीवन अहिले यस्तो छ
एजेन्सी । सन् २०१० मा क्यारेबियन मुलुक हाइटीमा आएको विनाशकारी भूकम्पले त्यहाँका धेरै मानिसलाई घरविहीन बनाएको थियो । त्यस समयदेखि त्यो देशलाई विश्वकै गरिब देश घोषित गरिएको थियो । त्यसैले विश्वका धेरै एनजीओहरु अहिले...